तपाइँको वेबसाइटको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ? - ठीक छ, Semalt सुन्नुहोस्!
ओलिभर किंग, Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक, भन्छन् कि धेरै व्यक्तिहरु विश्वास गर्छन् कि Google विश्लेषकबाट आफूलाई अलग गर्नु महत्वपूर्ण छैन, तर यो त्यस्तो छैन। यसको सट्टामा, यसले तपाईंलाई वेबसाइटको मालिक वा वेबमास्टरको रूपमा सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्दछ। भर्खरका हप्ताहरूमा, मैले मेरो वेबसाइटको गुणवत्ता र समग्र प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न धेरै तरिकाहरूको प्रयास गरेको छु। तपाईंले अप्ट-आउट ब्राउजर एड-अनहरूको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, ISP वा IP मार्फत बहिष्करण, साथै कुकीहरू मार्फत अप्ट-आउट।
अप्ट-आउट ब्राउजर एड-अन
गुगललाई धन्यवाद छ किनकि कम्पनीले गुगल एनालिटिक्स अप्ट-आउट ब्राउजर एड्-अनहरू सिर्जना गरी हाम्रो कार्यलाई सजिलो बनाउनको लागि विकसित गरेको छ। यो भन्नु गलत हुनेछैन कि यो तपाईको आफ्नै विचार र गुगल एनालिटिक्समा उपलब्ध एड-अनहरू रोक्न सुरू गर्ने सब भन्दा चाँडो र सजिलो तरीका हो। तपाइँले उपलब्ध डेस्कटप विकल्पहरू र ब्राउजरहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ र इन्टरनेट एक्स्प्लोररसँग कहिले पनि जानु हुँदैन। त्योसँग भनिए, मसँग यस प्रविधिको साथ केहि चेतावनीहरू छन्। मेरो प्रमुख समस्याहरू मध्ये एक add-ons हो; म तिनीहरूलाई मोबाइल उपकरण र डेस्कटप दुबै नेटिभ ट्राफिक स्वीकार गर्न सक्षम गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले यो गर्न सकेको छैन, तर म अझै धेरै प्रविधि परीक्षण गर्दैछु। साथै, एड्-अनहरूले तपाईंलाई सबै Google एनालिटिक्स रिपोर्टहरूबाट बहिष्कार गर्दछ किनभने तपाईं ठूला परिवर्तनहरू गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
ISP / IP मार्फत बहिष्कार गर्नुहोस्
ISP वा IP को माध्यमबाट बहिष्कृत गर्न, तपाईले आफ्नो Google एनालिटिक्स खातामा लग इन गर्नुपर्नेछ र प्रशासन विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यहाँ तपाईंले ड्रप-डाउन विकल्पबाट खाता छान्नु पर्छ र फिल्टर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यस सूचीबाट सबै अज्ञात र अपरिचित फाईलहरूलाई हटाउनुभएको छ; अन्यथा, तपाईंले केही समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। मलाई यहाँ तपाईं भन्न दिनुहोस् कि यो विधि माथिको विधि जत्तिकै प्रभावकारी छैन; जे होस्, यो अझै पनि विश्वभर मा वेबमास्टर्स को एक ठूलो संख्या द्वारा प्रयोग गरीन्छ र कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ। यस विधिको फाइदा यो हो कि तपाईले आईपी र आईएसपीहरू विश्वको कुनै पनि भागबाट बाहिर राख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईको आफ्नै कम्प्युटर प्रणाली वा ल्यापटपमा स्विच गर्न आवश्यक पर्दैन। यसले तपाईंको वेब डोमेन ट्राफिकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै डोमेन नामहरू फिल्टर गर्न सजिलो बनाउँदछ।
कुकीहरूको माध्यमबाट अप्ट आउट
मैले हालसालै प्रासंगिक डाटा बनाउनको लागि मेरो वेबसाइटको कुकीहरू व्यवस्थित गरेको छु किनकि यो सबै वेबसाइटहरूको लागि आवश्यक छ। यसले सबै प्रकारका मोबाइल उपकरणहरू र डेस्कटपहरूमा काम गर्दछ, उत्तम र सब भन्दा राम्रो परिणामहरू प्रदान गर्दै। गुगलले प्राय: आफ्नो नीतिहरू, सर्तहरू, र सर्तहरू उनीहरूको उन्नत कन्फिगरेसन सेटि withहरूसँग अनुपालन गर्दछन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि अपडेट गर्दछन् र गुगल एनालिटिक्सको मापदण्ड अनुसार। मलाई यहाँ भन्नुहोस् कि मेरो वेबसाइट तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ, जसको मतलब योसँग बहु सबडोमेन छैन र कुनै मोबाइल वा कम्प्युटर उपकरणबाट पहुँच गर्न सजिलो छ। मैले भर्खरै मेरो गुगल एनालिटिक्स आईडीमा युएए-एक्सएक्सएक्सएक्सई-वाई परिवर्तन गर्‍यो र धेरै राम्रो नतीजाहरू पाउँदछन्। अब म यो देख्न पाउँदा खुसी छु कि यसले मेरो वेबसाइटमा धेरै गुणस्तरीय ट्राफिक ल्याउँछ र सबै विचारहरू मूल मानिसबाट आएको हो, बट्सबाट होइन।